Otutu sclerosis na telererapy - Ọzụzụ Cognitive
Ọrụ ndị isi
Ebe nchekwa na-arụ ọrụ
Usoro omumu ihe
Nwata na oge uto
Afọ nke atọ
Bido dee ma pịa Tinye ka ịchọọ
Otutu sclerosis na telererapy
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Ọkpụkpụ sclerosis » Otutu sclerosis na telererapy
Ọrụ ọgụgụ isi, mebiri na ihe karịrị ọkara nke ndị ọrịa nwere otutu sclerosis, nwere ike imeziwanye site na telererapy.
La otutu sclerosis ọ bụ ọrịa dị mgbagwoju anya na-emetụta axons na sistemụ akwara. Ọ bụ ezie na a na-eche na ọ bụ ọgwụ mgbochi, ihe ndị kpatara ya ka na-amabeghị. Ihe anyị maara n’ezie bụ ihe enwere ike ịhụ anya: ọnya ọnya na-ebilite n’ọkwa dị iche iche na ụbụrụ ma ọ bụ n’ọkpụkpụ azụ, na-akpata ọnwụ Myelin n’ọgba nke mebiri n’oge.
N'ihi nke a, ndị ọrịa na-enwe mgbaàmà akwara ozi nke ụdị dị iche iche, dabere na ebe mbibi ahụ dị. Mgbaàmà ndị a na-akọkarị nwere ike ịgụnye paresthesias (tingling, numbness), olu mgbu na mgbu, ọhụhụ na ahụ ike. Mgbe ọnya ahụ dara, mgbaàmà ahụ na-adị mfe. Agbanyeghị, usoro ugboro ugboro nwere ike ibute nkwarụ dị ukwuu mgbe afọ 20-25  gachara.
Nsogbu a na-ezutekarị, mana ọ na-esiri ike idozi ya n'ụzọ ziri ezi, bụ nkwarụ uche na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis. Dabere na ọmụmụ, 50% na 70% nke ndị ọrịa nwere ọgụgụ isi ihe isi ike n'oge ọrịa. Nke a na - akpatakarị ịhazi ozi dị nwayọ, ihe isi ike ncheta na ịsụ ọnụ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ngwaọrụ iji nyochaa ọkwa nke nkwarụ - site na ngwa nyocha ngwa ngwa ruo na batrị neuropsychological zuru ezu - akụkụ a nke ọrịa ahụ na-enweta obere nlebara anya n'agbanyeghị na ọ dị ezigbo mkpa na ndụ ndị ọrịa  .
Na nyocha nyocha nke sayensị na nso nso a, ndị ọkachamara na-ekwu na ọ bụ obere echiche ka etinyere na ikike imerime ya na otutu sclerosis, agbanyeghị ọgwụgwọ ọgbara ọhụrụ egosila ezigbo nsonye na igbochi ma ọ bụ ibelata mmebi ndị a. Kama nke ahụ, a ga-akwanyerịrị akụkụ a ugwu. Ka ọ dị ugbu a, ụzọ kachasị aga eji belata ọganiru nke nsogbu ọgụgụ isi na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis na-emetụta ya cognitive rehabilitation eu ọzụzụ na mmega ahụ. Ọ bụ ezie na nke mbụ gụnyere otu usoro iwu metụtara ọrụ na ọrụ ụfọdụ, ndị nke ikpeazụ na-adabere na nsonaazụ bara uru mmega ahụ na-arụ na ọrụ ọgụgụ isi. Agbanyeghị, ụzọ abụọ ahụ na-egosi ọtụtụ adịghị ike: ndị bụ isi na-echebara itinye n'ọrụ n'ụlọ ọgwụ echiche na ikere òkè na ndị ọrịa .
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ọrụ ndị isi na-ebu amụma ịghọta ederede na ọsọ ọsọ ọgụgụ
Ọ dabara nke ọma, teknụzụ na-enye anyị ohere pụrụ iche nke na-abịa tele - okike nke mmezi mmezigharị uche site na ịntanetị, na-ejikọ n'ụlọ onye ọrịa, na-enweghị ọnụnọ anụ ahụ ọkachamara.
N'ime nnwale nyocha kachasị ukwuu nke ụdị a, Charvet et al.  na-ekwu na Ihe omume telererapy nwere ike melite ọrụ ọgụgụ isi na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis, na-enye usoro dị mma ga-adị mfe ịgbakwunye na usoro ọgwụgwọ.
N'ụzọ dị otú a, a na-emeri ihe mgbochi ndị ochie nke mmegharị mmezigharị uche, dịka ụgwọ, nnweta na oge; ndị edemede ahụ tụwara aro ka e jiri mmemme ọgwụgwọ ọgwụgwọ (Mmegharị Nkụzi Mmegharị, ACR). Nke a gụnyere a 15 nke omume nke gbadoro ọsọ, nlebara anya, ebe nchekwa ọrụ yana ọrụ ndị achọrọ nke a ga-edozi site na ntanetị, maka oge awa 60 n'ogologo izu iri na abụọ. Ihe omume a bu n’obi i theomiri ihe mkpali nke uwa n’eme, imeghari ihe ndi mmadu choro ka o we nye gi ihe nlere anya oge obula ma obughi ime ule.
Can nwere ike ilele ụdị ihe omume a na-ekwu n'ọmụmụ ihe na njikọ a: https://www.brainhq.com/?v4=true&fr=y
Ebe ọ bụ na edepụtagola mmetụta dị mma nke usoro ọgụgụ isi na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis, kama iji ntụpọ ACR tụnyere njikwa na-agafe agafe, ndị edemede họọrọ. otu njikwa akara aka. Na omume, ndị otu nọ na-ahụ maka egwuregwu a na-egwuri egwu egwuregwu vidiyo egwuregwu-jọgburu onwe ha ogologo oge nke ọmụmụ.
A na-enyocha ndị ọrịa tupu izu iri na abụọ nke ọgwụgwọ gwọọ ya site na batrị dị mgbagwoju anya nke nyocha akwara ozi. Agbanyeghi na uzo uzo abuo ha mere ka odiwanye mma na nnwale. ACR egosiwo na ọ dị irè karị. Nke a bụ eziokwu maka ndị ọrịa jirila ọtụtụ oge na ụdị egwuregwu vidiyo egwuregwu ihe egwuregwu karịa na ACR otu.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Otutu sclerosis: mmekorita nke di n'etiti ndi isi ihe na ncheghari onu ogologo oge
Otu akụkụ nke ọmụmụ a bụ na mmelite nke otu ACR bụ nke zuru ụwa ọnụ na enweghị njikọ na nnwale ụfọdụ. Nke a nwere ike ikwu na uru dị na mmemme dị otú a zuru ebe niile ma ghara ilekwasị anya n'otu ọrụ; ya mere, o yikarịrị ka a ga-atụ anya mmezi ndị a zuru ebe nile mee onwe ha ka ha di ndu kwa ubochi.
Na mkpokọta, ọmụmụ a gosipụtara nsonaazụ na-atọ ụtọ, na-enye data a pụrụ ịdabere na ya banyere ohere ịlele telererapy dị mma, ma ọ bụrụ na ọ kaghị elu, na-atụgharị anya na usoro ọgwụgwọ nke usoro ọgụgụ isi ugbu a, yana ọbụna na-atụ aro na nkwarụ ọgụgụ isi na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis enweghị ike ịbụ naanị. egbuola oge, ma ọ bụdị, ruo oge ụfọdụ, rụzigharị ya.
N’ezie, ọtụtụ ajụjụ na-emeghe, dịka ọmụmaatụ: ogologo ole ka ndozi ahụ na-adị? A ga - ewepụtaghachi nsonaazụ ndị a n'omume ndị buru ibu? Ihe omume a kwesiri ibu ihe diri uwa nile ma obu kwesiri ya ka odi nma nke onye obia obula? Ka osila dị, telererapy egosipụtagoro dị ka onye chọrọ ịtụle maka usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọrịa sclerosis n'ọdịnihu.
Nwekwara ike ịchọrọ:
Na GameCenter - Ntị na ntinye ọrụ ị ga-ahụ ọtụtụ ọrụ mmemme efu na-arụ na ọrụ isi
Lelee ihe ndị ọzọ anyị dere banyere isiokwu nke sclerosis.
Otutu Sclerosis: Mkpa Omumu, Okirikiri, Pathophysiology.
Brochet, B. & Ruet, A. Mmebi Mmetụta Ọrịa Ọtụtụ Sclerosis N'ihe banyere Oge Ọrịa na Plinotypes Clinical. Ihu ihu. Neurol. 10, 261 (2019).
DeLuca, J., Chiaravalloti, ND & Sandroff, Ọgwụ BM na njikwa nke akpachapụ anya na ndị ọrịa nwere otutu sclerosis. Nature Nyocha Neurology 16, 319-332 (2020).
Charvet, LE et al. Ọrụ ịma mma n'ọtụtụ sclerosis na-emeziwanye na sistemụ telererapy: nsonaazụ sitere na nnwale na-achịkwa enweghị usoro. Ejiri otu 12, (2017).
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ihe mmeghari mmebi nke uche na ihe onye isi n’inweta akwara mm ụr ụ
Ọkpụkpụ neuropsychological, otutu sclerosis, tele, Ọrịa neuropsychological
Otutu sclerosis na telererapy2020-07-172020-07-17http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/07/teleriabilitazione.jpg200px200px
Onye na-ekwu okwu n’ozi Antonio Conteese
Ọgwụ na-agwọ ọrịa na kọmputa programmer nwere otu mmasị na mmụta. Emere m ọtụtụ ngwa ọdịnala na ngwa weebụ ma kuzie ọmụmụ banyere njikọ dị n'etiti usoro ọgwụgwọ na teknụzụ ọhụrụ.
Ọrịa akparamaagwa akwara ozi
VAT ọ dịghị: 12727841004
Speech n'ịgwọ ọrịa
VAT ọ dịghị: 03350991208
A na-ekesa ọrụ a n'okpuru ikikere Creative Commons Nweta - Achọghị azụmahịa - Onweghi ọrụ 4.0 International.
Ikike niile echekwabara © 2020
Saịtị a na-eji kuki iji nye gị ahụmịhe nchọgharị ka mma. Ọ bụrụ na ị mechie ọkọlọtọ a, ị kwenyere na iji kuki. Can nwere ike ịtụleghachi ihe ọmụma a ka emechaa site na isoro njikọ kuki na njikọta menu.anabata Iwu kuki
Na-arụ ọrụ mgbe niile
Usoro iji meziwanye mmụta: nke dị irè?Mmụta, isiokwu
Usoro ọgwụgwọ maka aphasia post-strok: ọ bara uru?Aphasia, Edemede